Mitambo, 31 Zvita 2018
Mutungamiri mutsva weZimbabwe Football Association VaFelton Kamambo vane chishuwiro chekuti nhabvu ibhadhare zvakasimba vatambi nezvikwata.
VaChiyangwa havana kuzopinda musarudzo dzepiri kana kuti run-off, mushure mekukanda nguwani mudariro vachisarenda, mushure mekukundwa mudariro rekutanga naVaKamambo.
Chikwata chiri kusimudza mureza weZimbabwe, cheFC Platinum, chapinda munzira isina kunyanya kuoma mumakwikwi e2018/2019 Caf Champions League.
Thomas Mapfumo Otarisirwa muZimbabwe Nhasi
Muimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Mukanya Mapfumo ari kutarisirwa kupinda munyika nhasi achibva kuOregon, Portland, muAmerica uko ari kugara.
Mwaka weNhabvu weCastle Lager Premier Soccer League Unosvika kuMagumo.
Chikwata cheFC Platinum ndicho chakatora mukombe wemwaka uno chichipedza chiine mapoinzi makumi manomwe nemasere, chichiteverwa neNgezi Platinum FC, iyo ine mapoinzi makumi matanhatu nemashanu.
Liberia Inomisa Mufaro Wanga uri Mukamba yeChikwata chemaWarriors
Chikwata chemaWarriors charasa mukana wekuti chipinde mumafainari eAfrica Cup of Nations mushure mekurohwa 1-0 neLiberia mumutambo watambirwa kunhandare yeSamuel Doe kuMonrovia kwakare kuLiberia manheru eSvondo.
FC Platinum Inosimudza Zvakare Mukombe weCastle lager Premier Soccer League
FC Platinum, iyo yanga ichingoda poindi imwechete mumutambo wavo neShabanie Mine, yatora mapoinzi ese matatu ndokuramba yakasiya Ngezi Platinum Stars nemapoinzi mapfumbamwe kwasara mitambo miviri chete kuti makundano aya apere.
Makwikwi eChibuku Super Cup Otsviriridza neMugovera neSvondo
Zvikwata zvenhabvu zvinoteverwa nechaunga Caps United ne Dynamos zviri kupinda munhandare svondo rino zviine chinangwa chimwechete chekusandura mwaka wanga wakaoma kuti upere zvinodakadza.
Cavin Muodzi Otaura Pamusoro peHarvest Soccer Academy Yaakatanga kuSouth Africa
Muodzi, uyo akatanga Harvest Soccer Academy muCape Town mugore ra2016, ane makore makumi maviri nemana ekuzvarwa.
Vatsigiri vemitambo muZimbabwe vari mumafaro mushure mekunge chikwata chavo cherugby chemaCheetahs chakatora mukombe weAfrica Cup mushure mekurova Kenya 17-5 panguva imwe chetyo maWarriors akashanya ndokunorova Democratic Republic of Congo 2-1 mumutambo we 2019 Africa Cup of Nations.